DAAWO: Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo Baarlamaanka ka Codsaday in Kalsoonida uu siiyo Xukuumada Cusub – Radio Muqdisho
DAAWO: Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo Baarlamaanka ka Codsaday in Kalsoonida uu siiyo Xukuumada Cusub
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah Ee Somalia Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa uu ka Codsaday Mudanayaasha Baarlamaanka Somalia in ay Codka Kalsoonida siiyaan Xukuumada Cusub Ee uu soo Magacaabay Ra,iisul Wasaaraha Dalka Mudane Cumar cabdi Rashiid Cali Sharmaake kaa oo Habeenkii Xalay ahaa soo dhisay Xukuumad ka Kooban 67 Xubnood oo wajiyo Cusub u badan.
Madaxweynaha Jamhuuriyada ayaa waxaa uu sheegay in wada shaqeynta iyo kalsoonida Madaxda Qaranku ay keeni karto in Dalku horay u dhaqaaqo oo ay sahlanaato in Howlo badan la qabto inta aan la gaarin 2016 ka xiligaas oo qorshuhu yahay in Doorasho Xor ah ay Dalka oo dhan ka qabsoonto si Qorshuhu yahay hadii alle Idno waxaana uu Madaxweynuhu Baarlamaanka weydiistay in ay Fiiriyaan Danta Guud Ee Umadda Soomaaliyeed.
Ra.iisul Wasaaraha Dalka Mudane Cumar cabdi rashgiid Cali Sharmaake ayaa xalay waxaa uu soo dhameytiray Dhismaha Xukuumada Iyadoo lagu soo kordhiyay Xubnihii 20 ka ahaa Ee wasiirada 5 kale iyo Ra,iisul wasaare ku xigeen iyo sidoo kale Wasiiru Dowlayaasha iyo Wasiir ku xigeenada oo marka loo Eego Xukuumadihii Dalka soo maray iyadu ah Xukuumadii ugu tirada badneed marka laga Mudo ku dhawaad Sideed Sano ah waxaana la filayaa in Baarlamaanka uu Horgeeyo Dr Cumar Asbuuca soo socda.
Dhageyso Warka Duhurnimo ee Radio Muqdisho 06 02 2015
RW. Cumar oo maanta ka qayb galay kulan qado ah oo ka dhacay makhaayad ku taala xeebta Liido “Sawirro”
RW. Cumar oo maanta ka qayb galay kulan qado ah oo ka dhacay makhaayad ku taala xeebta Liido "Sawirro"